नेपाल आज | मन्त्रीपद खोसिएपछि बिचलित बनेका विष्ट आत्मसम्मानको खोजीमा
मङ्गलबार, २२ पुष २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक दुई साता अघि सकिएको छ। बैठकमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गरेको छ। बैठकमा सरकार संचालनदेखि एमसीसी सहयोग बारे घनिभूत छलफल पनि भए।
सोही बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटि सदस्य तथा पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बारे टिप्पणी गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको भनाइ राखे। पूर्व श्रममन्त्री विष्टले 'मागेको भए आफु राजीनामा दिन तयार' नै रहेको बताउँदै एकाएक मन्त्रीबाट हटाउँदा आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको बताएका थिए। तर आफ्नो आत्मसम्मानको खोजी गर्ने विष्टले श्रम क्षेत्रका व्यक्ति, नेता कार्यकर्ता, विदेशिने कामदार, पार्टीका नेता, अध्यक्षदेखि स्वयं प्रधानमन्त्रीको सम्मान आफु मन्त्रीपदमा रहँदा कति गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले पार्टी भित्र खोजिंदै छ।
२०७४ चैत्र २ गते श्रममन्त्रीको कुर्सीमा बसेका विष्टले त्यसको ठिक दुई महिनापछि मलेसिया रोजगारी एकतर्फी रुपमा बन्द जस्तै गरे। मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्दै आएका संस्थालाई एकतर्फी रुपमा खारेज गरेपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भयो। मलेसियन सरकार र नेपाल सरकारबाट संचालनको अनुमति लिएर वर्षौदेखि काम गर्दै आएका संस्थाले ठगी गरे भन्ने उनको जिकिर थियो।
उनले ति संस्थाले ठगी गरेको दलिल प्रस्तुत गर्नुको पछाडि उनी निकटका केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र व्यवसायीको आवरणमा सांसद पदमा पुगेको केही व्यक्तिको एकतर्फी ब्रिफिंङको हात छ। जसले ४ वर्षमा एक सय ६० करोड कमाउने सपना देखेका थिए। त्यहि सपना साकार पार्न उनले बिना कसुर, बिना प्रमाण दर्जनौ व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको सहारा लिए। तर ठगी मुद्दा दर्ता गर्न पर्याप्त प्रमाण समेत नभेटेको प्रहरीले विष्टकै दबाबमा तिनलाई पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। मलेसिया बन्द भएपछि सुरु भएको त्यो मुद्दाको छिनोफानो मलेसिया पुनः सुचारु हुँदा सम्म आइपुग्दा किनारा लागिसकेको छ। अर्थात पूर्वमन्त्री विष्टले जजसले ठगी गरे भनेका थिए ति अधिकांशले जिल्ला र उच्च दुवै अदालतबाट सफाई पाईसकेका छन्।
उनले ठग भन्दै जेल हालेका अधिकांशले अदालतबाट सफाई पाउनुले उनको त्यो कदम स्वार्थपूर्ण र व्यक्तिगत रिसिभी साध्न गरेको एउटा स्टन्ट थियो भन्ने ढिलै भए पनि प्रमाणित गरेको छ। तर आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको महसुस गर्ने विष्टले के ति आफैंले बिना कसुर र प्रमाण जेल हालेका व्यवसायीको आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठामा चोट पुगेको महसुस गरेका छन्। आफ्नै मन्त्रालय र सरकारका विभिन्न निकायबाट काम गर्ने अनुमति पाएर व्यवसाय संचालन गरिरहेका व्यवसायीलाई ठगको बिल्ला भिराएर जेल हालेका विष्टले के ति व्यवसायीको शिर मेरो कारण गिर्न पुग्यो भनेर महसुस गरेका छन्? बिना कसुर तिनले भोग्नु परेको मानसिक र शारीरिक पीडा त विष्टले महसुस गरेका छैनन् होला।
मेरो कारण समाजमा गुमेको तिनको इज्जत र प्रतिष्ठा आज फर्कियो होला भनेर सोच्न सम्म चेस्टा विष्टले गरेका छैनन्। किनकी एक पल्ट गुमेको इज्जत र प्रतिष्ठा फेरी फर्काउन कठिन पर्ने रहेछ भनेर आज स्वयं उनले महसुस गरिरहेका छन्। आफ्नै पार्टी अध्यक्ष, शीर्ष नेता र अग्रजले गरेको आग्रहलाई पटक-पटक बेवास्ता गर्दा के तिनको आत्मसम्मानमा चोट पुगेन होला? के तिनको मर्यादालाई सम्मान गर्नु विष्टको कर्तव्य र दायित्व थिएन? लामो समय मलेसिया बन्द हुँदा त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा मात्र नभइ रोजगारी त्यसमा आश्रित व्यवसायी, विदेशिने कामदार र मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर देखिन थाल्यो भन्दै तत्काल त्यसको निकास खोज्न विष्टलाई नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक-पटक आग्रह गरे।
तर विष्टले तिनको आग्रहलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाए। किनकी मलेसिया रोजगारीमा उनको स्वार्थ जोडिएको थियो। मलेसियाको भिसा प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका विगतका व्यवसायीलाई हटाएर आफु निकटका व्यक्तिलाई त्यसको जिम्मा दिने उनको ठुलो ग्राण्ड डिजाइन थियो। जस वापत उनले वर्षौ पेन्सन पाउने सपना देखेका थिए। तर विदेशिने कामदार र मुलुकको हितमा काम गर्न विष्टलाई उनका अग्रजले दिएको सुझाव र आग्रह नमान्दा के ति अग्रजको आत्मसम्मानमा चोट पुगेन होला? क्याडर बेस पार्टीमा शीर्ष नेतृत्वले गरेको आग्रह नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला र? तर त्यो प्रश्न विष्टले उठाए, आफ्नै नेतृत्वको आग्रहलाई अवज्ञा गरेर।
पार्टीका प्रवक्ताले मलेसिया रोजगारीबारे जिज्ञासा राख्दा 'तपाईलाई पनि ठगहरुले केही पुर्याई सके' भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दा के उनले आफु भन्दा सिनियर नेताको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने वाक्य उच्चारण गरेकि भन्ने हेक्का राख्नु पर्दैन थियो? सामजिक सुरक्षा योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका बारेमा स्टेकहोल्डरको गुनासा पनि सम्बोधन गर्नु भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दा के प्रधानमन्त्रीको आत्मसम्मानको ख्याल विष्टबाट भयो?
विष्टलाई नजिकबाट चिन्नेहरु उनी एक ढोंगी नेता भएको टिप्पणी गर्छन। आफु बाहेक अरुलाई मान्छे नै नगन्ने उनको स्वभावले उनलाई प्रधनमन्त्री ओलीले पदच्युत गरेको उनीहरुको बुझाई छ। अरु बेला मेनपावर व्यवसायीदेखि सेवाग्राहीको भिडभाड हुने श्रम मन्त्रालय विष्ट आएपछि भने सुनसान जस्तै बन्यो। उनलाई भेट्न सहज थियो त उनको गुनगान लेख्ने पत्रकारका निम्ति र उनले रुचाएका व्यक्तिको निम्ति। श्रमको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्ट आफुले देशै सम्हालेको झैं छनक दिन्थे।
आफैंले सम्हालेको श्रम मन्त्रालयको एक अभिन्न क्षेत्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायका व्यवसायीलाई उनी भेट्न त परको कुरा दुर-दुर गर्थे। एक जुझारु नेताले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा बोकेर उनलाई बधाई र शुभकामना दिन गएका व्यवसायीका नेतालाई देख्ने बित्तिकै उनी बाघले शिकार झम्टिए झैं गर्थे। उनलाई बधाई दिन गएका एक व्यवसायी त्यो क्षण सम्झदै भन्छन्-'हामी कुनै स्वार्थ बोकेर उहाँलाई बधाई दिन मन्त्रालय गएका थिएनौ। तर एउटा राम्रो अभिभावक श्रम मन्त्रालयले पाएको खुसीमा हामी उहाँलाई बधाई दिन गएका थियौं।
उहाँले त हामीलाई देख्ने बित्तिकै तपाईहरु किन यहाँ? किन नबोलाई आउनु भयो भनेर उल्टै झपार्नु भयो र हाम्रो हातको बुकी खोस्दै ल ल तपाईहरु गइहाल्नुस भन्नु भयो। हामी त श्रम मन्त्रालयको एउटा स्टेक होल्डर हौँ। हाम्रो काम त दिन रात त्यहि मन्त्रालयमा पर्छ। तर एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हामीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिमा बिना अनुमति टेकेको जस्तो व्यवहार गर्नु भयो। सायद त्यहि दम्भ र घमण्डले उहाँको मन्त्रीपद खोसियो।' विष्टले जति दिन मन्त्रालय सम्हाले उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई 'ठग र दलाल' भन्दा माथिको नजरले नहेरेको उनीहरुको बुझाई छ।
मन्त्री पद खोसिँदा विष्ट बिचलित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना नपुग्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने चर्चा चले पनि मङ्सिर...गते मात्र मन्त्रिमण्डल फेरवदल भयो। ओली सरकारमा रहेका कुन-कुन मन्त्री हट्दै छन् र को-को मन्त्री बन्दै छन् भनेर धेरै संचार माध्यमले आ-आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर समाचार बनाए। तर ति अधिकांश समाचारमा मन्त्रीबाट हट्ने सूचीमा गोकर्ण विष्ट पनि पर्दैछन भन्ने अनुमान समेत लगाउन सकेनन्।
सकुन पनि कसरी हरेक दिन कुनै न कुनै मिडियालाई बोलाएर आफुले गरेको सानो कामलाई पनि ठुलो बनाएर अन्तर्वार्ता दिने विष्ट हट्लान भन्ने अनुमान थोरैलाई थियो। स्वयं विष्ट पनि आफु मन्त्रीबाट नहट्नेमा यति कन्फीडेन्ट थिएकी मन्तिपरिषद पुनर्गठन हुने अघिल्लो दिन ४ बजे सम्म उनी आफु श्रममन्त्री नै रहने भनेर आफु निकटका केही व्यक्तिलाई भन्दै थिए। तर जब ५ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नयाँ बन्ने मन्त्रीको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो त्यतिबेला भने विष्ट छाँगाबाट खसे जस्तै भए। यद्यपि नयाँ मन्त्रीको नामावली र सपथ सम्बन्धी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले राति ९:३० बजे मात्र सार्वजनिक गर्यो।
मन्त्री हुन्जेल मिडियामा कसरी छाउने भनेर जानेका विष्टले मन्त्रीपद चैट भएपछि पनि मिडियामा छाउने र पब्लिक सिम्प्याथी पाउने पर्याप्त कोसिस गरे। मन्त्रीबाट हटेको भोलिपल्ट उनी पुनः श्रम मन्त्रालय गए, नयाँ मन्त्रीलाई बधाई दिने बहाना गरेर। तर नयाँ श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव मन्त्रालय पुग्नु अघि नै उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफुले गरेका कामको चर्चा गरे भावुक मुद्रामा। तर नवानिक्युक्त मन्त्रीलाई बधाई दिन सिंहदरबार पसेका विष्ट नयाँ श्रममन्त्री मन्त्रालय पुग्नु अघि नै बाहिरिए,र ट्याक्सी चढेर घर फर्किएको भन्दै आफ्नो चटकी देखाउन भ्याए।
मन्त्रीपद खुस्किएपछि विष्ट यति बिचलित भएकी त्यो पीडा उनको अनुहारमा मात्र सीमित बनेन। हरेक दिन कुनै न कुनै मिडियामा लेख्ने, लेखाउने, अन्तर्वार्ता दिने गर्न थाले। त्यो क्रम एक सातासम्म चलिरह्यो। कार्यसम्पादनमा आफु अन्य मन्त्री भन्दा उत्कृष्ट थिए भनेर उनले मुखै खोलेर भन्ने आँट नगरे पनि उनको भाव र आशय प्राय सबै अन्तर्वार्तामा एउटै हुने गर्थ्यो। कसैले तपाई भनोस नभनोस आफैं मपाई भने जस्तै विष्ट आफुले धेरै र राम्रा काम गरेको भनेर फेहरिस्त लगाउँथे। तर जब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन बाहिरियो तब भने विष्टको मुखमा मात्र बुझो लागेन आम जनताले पनि उनले कति काम गरेका रहेछन् भनेर जान्ने/बुझ्ने मौका पाए।
सुनेको र भोगेको कथा फरक हुन्छ भने झैं विष्टले बडाई चढाई गरेको मात्र सुन्ने र पढ्ने बानी परेका जनताका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको त्यो प्रतिवेदन पत्यार नलाग्न सक्थ्यो। तर वास्तविकता भने त्यहि थियो। किनकी मन्त्रीहरुको कामको मुल्यांकन गर्ने मन्त्री स्वयंले नभई प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयले हो। जुन प्रतिवेदनले विष्ट सबै भन्दा निकृष्ट मन्त्री देखाएको छ। जसमा विष्टले जम्मा ५ अंक मात्र पाएका छन्। तर लोक र सामाजिक संजालले भने विष्टको चर्चा यस्तो देखायोकी उनी उत्कृष्ट काम गर्दागर्दै मन्त्रीबाट हटाइए।
भजन मण्डली गठन
ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मध्ये बढी चर्चा र मिडियामा छाइरहने मन्त्री थिए विष्ट। हुन त मिडिया भनेपछि उनी आफैं ज्यान फ्यालेर लाग्ने मान्छे हुन् भनेर पनि टिप्पणी गर्ने गर्छन। आखिर कसरी मिडियामा छाउथे त विष्ट? मन्त्रालयले कुनै काम वा योजना सार्वजनिक गर्नु अघि उनी केही ठुला मिडियाका र नेकपाको झण्डा बोकेका पत्रकारलाई सकारात्मक संदेश प्रवाह गर्न प्रयोग गर्थे। हुन त उनको सकारात्मक संदेश प्रवाह गरे वापत उनी निकटका पत्रकारले केही एनजीओको काम समेत पाएका छन् भने केहीले मन्त्रालयको ठुलै प्रोजेक्ट हात पारेका छन्।
पूर्वमन्त्री विष्टले अहिले तिनै आफु निकट मानिने र आफ्नो भजन मात्र गाउने पत्रकारको समूह गठन गरेका छन् पर्दा पछाडि बसेर। विष्टलाई नजिकबाट चिन्ने एक पत्रकारका अनुसार अब केही दिनपछि त्यो समूहले आफु आवद्द संचार माध्यमबाट बहालवाला श्रममन्त्री यादवलाई खुइल्याउन थाल्नेछन् र विष्ट हट्दाको परिणाम भनेर चित्रण गर्न सुरु गर्नेछन।
'मिडियामा आफु बोलौं त पार्टी र जनताले मन्त्रीबाट हट्दा कति पीडा परेको रछ भनेर मुल्यांकन गर्छन। बरु सबैभन्दा राम्रो आफु निकट मानिने पत्रकारलाई अघि सरेर आफुले राम्रो गरेको तर अहिलेका मन्त्रीले सबै बिगारे भनेर देखाउन उहाँ अदृश्य रुपमा लाग्नु भएको छ। यसले उहाँलाई त राम्रो गर्दैन न नै उहाँको भजन गाउँने पत्रकारले पनि बुझ्नुपर्छ यो देशमा गोकर्ण विष्ट भन्दा पनि राम्रो र बिना स्वार्थ काम गर्नसक्ने मन्त्री छन् भनेर बुझ्नुपर्छ' श्रम सम्बन्धी रिपोर्टिंङ् गर्दै आएका एक पत्रकारले भने।
उल्लेखित समाचार पब्लिक न्युज एजेन्सी डट कम (publicnewsagency.com) बाट साभार गरिएको हो । यहाँले पनि पब्लिक न्युज एजेन्सीबाट समाचार साभार गरी निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।